तथ्य जाँच: अण्डा र केरा एक साथ खानु हानिकारक छ - THIP Media
Home तथ्य जांच - Nepali तथ्य जाँच: अण्डा र केरा एक साथ खानु हानिकारक छ
एक सामाजिक सञ्जाल पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि अण्डा र केरा एक साथ खानु हानिकारक हुन्छ। हामीले यस ’boutमा तथ्य जाँच गर्यौं र पत्ता लगायौं कि उक्त दाबी झूटो छ।
उक्त सन्देश घाना मा एक जना व्यावसायिक फुटबल खेलाडी सहित सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू द्वारा विभिन्न स्वरूपमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक देखा परेको छ।
प्राय सबै दाबीमा लेखिएको हुन्छ कि “कहिल्यै पनि अण्डा र केरा एक साथ नखानुहोस् ’cause तिनीहरूको मिश्रणले ५ मिनेट भित्र ज्यान लिनसक्ने विष बनाउँछ।”
भाइरल भएको उक्त सन्देशको केही स्न्यापशटहरू तल दिइएका छन्
के अण्डा र केरा हानिकारक खाद्य पदार्थहरू हुन्?
अण्डा र केरा वास्तवमा धेरै पौष्टिक खाना हुन्। वेबएमडीका अनुसार, ‘दूध तथा अण्डामा प्रोटिनको सब भन्दा उच्च जैविक मान (वा गोल्ड स्टेन्डर्ड) रहेको हुन्छ। एउटा अण्डामा ७५ क्यालोरी मात्र हुन्छ तर ७ ग्राम उच्च-गुणस्तरको प्रोटिन, ५ ग्राम बोसो, र १.६ ग्राम संतृप्त बोसो तथा फलाम, भिटामिन, खनिज, र क्यारोटीनोइडहरू पाइन्छन्।
केरामा पनि संतृप्त बोसो, कोलेस्ट्रॉल र सोडियमको मात्र थोरै हुन्छ । यो खाद्य फाइबर, भिटामिन सी, पोटेशियम र मैंगनीज र भिटामिन बी६ को पनि धेरै राम्रो स्रोत हो।
यदि सँगै सेवन गरियो भने के अन्डा र केरा विषाक्त हुन सक्छ?
दाबीको कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाण छैन। साथै पेनकेक जस्ता धेरै लोकप्रिय पकवान प्राय केरा र अण्डाको मिश्रण बाट नै बनाइन्छ।
तर पनि हामीले भाइरल भएको उक्त दाबी आहार र पोषण विशेषज्ञ द्वारा स्पष्ट पार्ने निर्णय गर्यौं।
आहार र पोषण विशेषज्ञ काजल गुप्ता भन्छिन्, “अण्डा र केरा दुबै सुपरफूड हुन् र पोषणको ठूलो स्रोत हुन्। यस प्रकारको भनाइहरू नक्कली छन् र मानिसहरूलाई यस्ता खाद्य पदार्थहरूको खाद्य मानकको ’boutमा सचेत गराउनु आवश्यक छ। अण्डा र केराको मिश्रणले कुनै विषाक्त प्रभाव पार्दैन। यद्यपि व्यक्तिले एलर्जी वा अपच जस्ता समस्याहरूको ’boutमा सचेत हुनुपर्छ।
केही पूर्व-अवस्थित रोगहरू जस्तै मृगौला रोग भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै विशेष खनिज सेवन नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, र त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई केरा वा अण्डा नखान सल्लाह दिइएको हुनसक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अन्डा र केरा सँगै खानु हानिकारक हो। ”
स्वास्थ्य तथा व्यावहारिक आहार विशेषज्ञ र न्युट्रीआहार कि संस्थापिका वर्तिका सिंघल भन्छिन् , “यदि अण्डा र केरा हानिकारक पदार्थहरू द्वारा दूषित छैनन् भने एकै समयमा खाँदा कुनै हानि हुँदैन। अत्याधिक उच्च मधुमेह भएका मानिसहरूले केरा खानु हुँदैन तर पनि शरीरमा कुनै विषाक्त प्रभाव पार्ने कुनै सम्भावना छैन। यदि कसैले केरामा कच्चा अण्डा मिसाएर सेवन गरिरहेको छ भने, कच्चा अण्डामा रहेको सल्फरको मात्रा केरामा रहेको कार्बोहाइड्रेट सँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ, जसले गर्दा पाचन समस्या उत्पन्न हुन्छ, तर पनि यो घातक हुँदैन। “
Previous articleतथ्य जाँच: अल्जाइमरको परीक्षण: फोटोमा ऊँट कहाँ छ?
Next articleअद्यावधिक तथ्य जाँच: के डेटोलले कोभिड-१९ फैलाउने कोरोनाभाइरसलाई मार्न सक्छ?